LeadSift: Jiri Omenala Na-ere Ọchịchị Nweta Nweta | Martech Zone
Satọde, Ọgọstụ 3, 2013 Fraịde, Ọgọstụ 2, 2013 Douglas Karr
78% nke ndị ahịa na-eji mgbasa ozi mmekọrịta na-agwa ndị ọgbọ ha. LeadSift amalitela igwe ojii ya nke na-enyocha ọtụtụ nde mkparịta ụka gafee ọwa mgbasa ozi mmekọrịta iji chọta ma nyefee ihe ndị nwere ike iduga na azụmaahịa ma na-enyekwa onye ọ bụla ụzọ metrik nke na-ekewa ebumnuche. Ọ na-eme ka echiche nke ire ere mmekọrịta dị mfe ma mee ka gị na ndị otu gị rụọ ọrụ nke ọma ma rụọ ọrụ nke ọma na usoro ire ahịa site na ijikọ na CRM na enweghị nhịahụ.
LeadSift na-eme ka ọ dị mfe site na ịbubata ụzọ dị mkpa.
Sift Site na Noise - LeadSift hụrụ mkparịta ụka na soshal midia nke dị gị mkpa ma na-ehichapụ mkparịta ụka ndị na-adịghị mkpa.
Napụta Didara Ogo - Leadsift na-ele ndị ọrụ nchịkwa mmadụ anya, psychographics na mkparịta ụka dị ugbu a iji hụ na ndu gị dị mkpa.
Soro na Mfe - Soro LeadSift na-eduga na ntinye aka ha ma soro ha nwee mmekọrịta mmekọrịta ndị ahịa gị.
Tags: chọta ndu na ntanetịeduna-edugandu ndi mmadunnweta mgbasa ozi